DEMİRဥက္ကPresident္ဌ Attack Aircraft F-35 Lightning II နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေDEMİRဥက္ကPresident္ဌ Attack Aircraft F-35 Lightning II နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
DEMİRဥက္ကPresident္ဌ Attack Aircraft F-35 Lightning II နှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
21 / 05 / 2020 အထွေထွေ, ရာသီဥတု, ခေါင်းစီးသတင်း, ကာကွယ်ရေး, တူရကီ
လျှပ်စီး ii အကြောင်းရှင်းလင်းချက်
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္က္ဌ ဒေါက်တာ mailsmail DEMİRသည် STM ThinkTech မှစီစဉ်သော panel တွင် Joint Strike F-35 Lightning II စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြခဲ့သည်။
သမ္မတDEMİR၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်“ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ဖြစ်ပျက်နေသောအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှင်းလင်းသောအချက်အလက်မရှိပါ။ သို့သျောလညျး, ကျနော်တို့ကနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများနှင့်ပိုပြီးနွေးထွေးသောဆက်ဆံရေးမြင်ကြပြီ။
F-35 လုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကျွန်ုပ်အစဉ်အဆက်မပြတ်အလေးထားပြောဆိုသည့်အရာမှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါတနာများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိတ်ဖက်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုလုံးကိုစဉ်းစားသောအခါဤအဆင့်ကို S-400 နှင့်ဆက်စပ်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ တူရကီသည်လေယာဉ်နှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုချရန်မှာခြေထောက်မဟုတ်သော်လည်းအခြားကိစ္စတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူများကိုကျွန်ုပ်တို့အကြိမ်ကြိမ်အနားယူခဲ့ပြီးအသံလွှင့်သည့်အခါကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအဖြေမရခဲ့သော်လည်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူ့ကိုယ်ပိုင်စကားဖြင့်ပင်စီမံကိန်းသည်အနည်းဆုံးဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ မှ ၆၀၀ အထိအပိုထပ်ဆောင်းကုန်ကျမည်ဟုဆိုသည်။ ထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏တွက်ချက်မှုများအရလေယာဉ်တစ်စီးလျှင်အနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၈ မှ ၁၀ သန်းအထိထပ်ဆောင်းကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဒါဟာတူရကီမှအလွန်ရှင်းလင်းသောမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးစေခြင်းငှါတီထွင်ခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ခဲ့သောဘုံသဘောထားကိုပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်မှတ်ကိုမှန်ကန်စွာဆက်လက်ထားရှိမည်ကိုပြသခဲ့သည်။ တူရကီရှိမိတ်ဖက်များ၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမည်သည့်အစီအစဉ်ကရပ်တန့်သွားမည်နည်း၊ ၎င်းသည်ရှင်းလင်းချက်ကိုပေးသည့်ညွှန်ကြားချက်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သို့မည်ပုံ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တာ ၀ န်များကိုကျေပွန်စွာဆောင်ရွက်သည်။ ဒီနေ့၏အကျိုးကျေးဇူးကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
မတ်လ 2020 နောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ မတ်လ 2020 လာ။ လွန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများသည်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒါကြောင့် 'ငါကြိုးကိုချက်ချင်းဖြတ်ပစ်လိုက်ပြီး' အခုငါတူရကီကိုသွားနေပြီ 'ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ သူတို့ကတူရကီစက်မှုလုပ်ငန်းများပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတောင်အမေရိကန်အရာရှိများကသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေး၊ ကုန်ကျစရိတ်နဲ့ပေးပို့ချိန်များနှင့် ပတ်သတ်၍ အမျိုးမျိုးသောပတ် ၀ န်းကျင်အမျိုးမျိုးရှိတူရကီကုမ္ပဏီများ၏စွမ်းဆောင်ချက်ကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့ကြတာတောင်မှဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ခဲ့ကြသည်။ ဒီနေ့ငါတို့တွေ့ပြီ၊ ဤအရည်အချင်းပြည့်မီသောကုမ္ပဏီများကိုထုတ်လုပ်သူအသစ်များဖြင့်အစားထိုးရန်မှာမလွယ်ကူလှပါ။
တနည်းကား, ငါတို့ရှိရာအရပ်၌ငါတို့ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်ဆက်လက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် 'သင် (ယူအက်စ်) ကကျွန်ုပ်တို့ကိုဤကဲ့သို့သောဆက်ဆံမှု၊ ထုတ်လုပ်မှုကိုရပ်တန့်နေခြင်း' ကိုတားဆီးရန်ကျွန်ုပ်တို့မသွားခဲ့ပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကယ်၍ မိတ်ဖက်သဘောတူညီမှုရှိပြီးလမ်းကိုဖောက်မယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လျှောက်လှမ်းမယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကဒီအတိုင်းသစ္စာရှိစွာဆက်လုပ်သင့်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
DEMİRYOLCUYUZအသက်နှင့်ရထားလမ်းအသင်း photography ယှဉ်ပြိုင်စည်းရုံး
Coronavirus သည် F-35 Lightning II ထုတ်လုပ်မှုကိုရိုက်ခတ်သည်
အဆိုပါ IMM အကြောင်းကိုမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းကြေညာချက်! Metro ကာလ၌ထစ်လုပ်ခဲ့တယ်
İETT Tools များဖျေါပွခကျြနဲ့ပတျသကျတဲ့ IMM သည်အာဏာပိုင်
Metrobus မတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်၍ IETT မှထုတ်ပြန်ချက်
TCDD သို့သွားသောလမ်းနှင့်ရထားလမ်းအပေါ်မျက်မှောက်ခေတ်အရေးပေါ်အခြေအနေတုံ့ပြန်မှုနှင့် UNIMOG ကိုကယ်ဆယ်ခြင်း…
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းဥက္ကPresident္ဌDEMİR S-400 ထုတ်ပြန်ချက်
၁။ TCDD ၏အထွေထွေမန်နေဂျာSüleyman Karaman မှနိုင်ငံတကာမီးရထားစနစ်များ…
အဆိုပါ ropeway စီမံကိန်း၏ Inebolu ရှင်းပြချက်သည့် AK ပါတီခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌမှ လာ.
Akyazıမြူနီစီပယ် YHT လိုင်းအကြောင်းဖော်ပြချက်ကို
Akyazi ရှင်းပြချက်ဟာစည်ပင်သာယာလိုင်း YHT ကနေလာ
သူ TCDD İzmirဆိပ်ကမ်းများ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း
TMMO Kocaeli ဌာနခွဲကသမ္မတ Izmit လမ်းရထားစီမံကိန်းအကြောင်းကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်း
TCDD တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ် YHT လမ်းAlifuatpaşပုဒ်မနှင့် ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များကိုဖန်ဆင်း
ခရီးသွားဧည့် Orient Express ကို Wagon အကြောင်းတောင်းဆိုချက်များရှင်းလင်းချက်ငှါး